IiDrones zeNtengiso eziNgagunyaziswanga | Martech Zone
IiDrones zeNtengiso ezingagunyaziswanga
NgoMvulo, Julayi 10, 2006 NgoLwesine, Meyi 4, 2017 Douglas Karr
NgoLwesihlanu odlulileyo, bendinengxoxo-mpikiswano enkulu nomhlobo wam, uBill Hammer. Isikhundla sakhe yayikukuba ukuba nohlahlo-lwabiwo mali lomkhosi omkhulu akenzanga nto ngaphandle kokungcwaba uqoqosho. Ndiphikisile ukuba umkhosi, ngeendlela ezininzi, ulingana norhulumente otyala imali kuphuhliso lobuchwephesha obutsha kunye nemveliso eninzi. Ndingadibanisa ukuba, kwishishini 'lokubulala okanye ukubulawa', iziteki azikho phezulu xa kuziwa kwimfuno yomgangatho kunye nemveliso.
(Nceda ungandibhaleli 'umongezi wemfazwe' izoyikiso zokufa ngale post. Ndiqinisekile hayi isithi ixabiso letekhnoloji kunye nemveliso ngobuninzi kufanelekile ukuphalaza igazi.)
Ngayo yonke loo nto ithethwayo, jonga inqaku likaGizmodo iidrones zokuthengisa ezingenamntu. Impembelelo kunye nokuzenzekelayo! Ewe, andiqinisekanga ukuba le yimpumelelo yabathengi. Into yokugqibela endiyifunayo kukubhabha ngeBluetooth yam ye-PDA indixelela ukuba i-deodorant iyathengiswa ibhloko elandelayo ngaphezulu.
Mhlawumbi uBill wayenenqaku…
Kwimpembelelo kunye nokuZenzekelayo
Ukuthengisa ngokubambisana kunye neGoogle Spreadsheet